အလင်းရောင်ကြယ်များ: May 2015
မဆင်မခြင် ဆိုင်ကယ်စီးခြင်း မော်တော်ယာဉ်မောင်းခြင်း ရလာဒ်များ ပုံရိပ်
ဆိုင်ကယ်စီးခြင်းသည် ခေါင်းတလားကြီးအား ကုန်းဆင်းမှ တွန်းချသည်နှင့်အလားသဏ္ဍန်တူပေသည်။
Naing Zay added 21 new photos.
ကျွန်တော်ဒီဓါတ်ပုံတွေကူယူတင်ပေးရတာ နားလည်ပေးကြပါဗျာ ------- ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှတစ်နေ့တစ်ခြား ဆိုင်ကယ်ဖင်ထောင်တဲ့ကလေးတွေပေါလာတယ်။ ပြိုင်ကားလေးတွေပေါလာတယ်။ဘယ်ကလိုင်စင်ယူထားမှန်းမသိတဲ့ လိုက်ထရပ် ဒိုင်နာ ယဉ်တွေပေါလာတယ်။ အဆိုးဆုံးကအမုန်းခံပြောတာတောင်ဦးထုတ်မဆောင်းတဲ့ကိစ္စ လမ်းပြောင်းပြန်မောင်းတဲ့ကစ္စ ကန်တော်ကြီးမှာ အဲဒီဖင်ထောင်တဲ့ကောင်တွေကိုရှောင်နေရတယ်။ မော်တော်ပီကယ်ကလည်း မီးပွိုင့်မှာထိုင်နေတယ်။ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဆွဲတဲ့သူကို မီးပွင့်ခလုတ်ဖွင့်ပိတ်ခိုင်းထားတယ်။ (35 လမ်း 80ထောင့်) ကောင်မလေးတွေက ဦးထုတ်လေးတွေရှေ့မှာထား ဆံပင်ဖားလားလား ယောက်ျားလေးတွေကပဲများ လက်တွေကဘေးကားထား ကဲများများမပြောတော့ပါဘူး ဒီပုံတွေသာကြည့်ကြပါ အဲဒီလိုတွေမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းကြပါဗျ---------
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/28/2015 11:41:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကယ်ဆယ်စဉ် သေဆုံးဒဏ်ရာရကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့ဝင်သုံးဦးအား နိုင်ငံတော်သမ္မတစွမ်းဆောင်ရည်ဆုချီးမြှင့်မည်
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကိုကယ်ဆယ်ရင်း သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရခဲ့သူ ကြက်ခြေနီ တပ်ဖွဲ့ဝင်သုံးဦးအား သမ္မတဦးသိန်းစိန်က နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဆုချီးမြှင့်မည် ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို နေပြည်တော် ၌ မေလ ၁၅ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ကွမ်းလုံမြို့နယ် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ ကိုမိုးကျော်သန်း၊
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/11/2015 11:00:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြောက်ကိုရီးယား ရေငုပ်သင်္ဘောမှ ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှတ်မှု တောင်ကိုရီးယား စိုးရိမ်
ရေငုပ်သင်္ဘောမှ တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်မှုကို အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း မြောက်ကိုရီးယား၏ ကြေညာချက်အပေါ် စိုးရိမ်မိကြောင်း တောင်ကိုရီးယား အစိုးရက ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထိပ်တန်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/11/2015 10:56:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တွင် RNSC နှင့်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် နယ်စပ် လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်
စစ်တွေ၊ ၁၁ မေ၂၀၁၅၊ လူသာကျော် (ရခိုင်)
ရခိုင်ပြည်နယ် အနောက်ဘက်နယ်စပ်တွင် မြန်မာနယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွှတ်ရေး ကောင်စီ (RNSC)အဖွဲ့တို့ မေလ ၄ရက်နေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်၊ နယ်စပ် လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ထားကြောင်းအမည် မဖော်လိုသူ ရဲအရာရှိတစ်ဦးကMID NEWS သို့ပြောသည်။
“မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ် တလျှောက် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် မေလအတွင်းက တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/11/2015 10:55:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မိုဘိုင်းတင်းမ်က သုံးနှစ်ကျော်အတွင်း တရားမဝင် ကုန်စည် ကျပ် ၃၆ ဘီလီယံကျော် ဖမ်းဆီးရမိ
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းမှ စ၍ သုံးနှစ်ကျော် ကာလအတွင်း တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှု တားဆီးထိန်းချုပ်ရေး အဖွဲ့ Mobile Team က ခန့်မှန်း တန်ဖိုးအားဖြင့် ကျပ် ၃၆ ဘီလီယံကျော်ရှိ တရားမဝင် ကုန်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့သည်ဟု ၎င်းတို့၏ စာရင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှု တားဆီးထိန်းချုပ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ စီမံမှုဖြင့် Mobile Team အဖွဲ့သည်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/11/2015 10:52:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြန်မာကမ်းရိုးတန်းဒေသများ အထူးသတိပြု့ပါ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်
၁၃၆မိုင်အကွာ မီးတောင်ပေါက်ကွဲနေပါပြီး ဆူနာမီ လှိုင်း
ထိုင်းသတင်းဌာနများမှလဲ သတိပေးနေပြီဖြစ်သလို မြန်မာ
သတင်းဌာန FM ရေဒီယိုများမှလဲသတိပေးနေပါပြီ။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/11/2015 10:50:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မြန်မာအလုပ်သမားများသည် အစာရေစာ ငတ်ပြတ်သဖြင့် အနီးအနား ကျေးရွာများကို သွားရောက်ကာ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/11/2015 10:47:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
နှလုံးခုန် ရုတ်တရက် ရပ်တန့် စေတဲ့ ရောဂါ
( ဒီဆောင်းပါးလေး ဟာ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ကျန်းမာရေး နဲ့ပက်သက်တဲ့
တရုတ်လူမျိုး နဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ ထမင်းစားနေစဉ်မှာ ရေနွေးသောက်သုံးတဲ့အလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ရေအေး ( ရေခဲ ရေ သောက်သုံးလေ့ ) မရှိကြပါဘူး။ခုချိန်မှာ တော့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/07/2015 01:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
လူတိုင်းသိသင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ရေဆေးရင် ပြောင်တာပဲ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/07/2015 01:03:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အမေရိကန် လက်ဝှေ့သမား ဖလော့ဒ်မေ၀ယ်သာကို နာမည်ဖျက် သိက္ခာချမှုနဲ့ ဇနီးဟောင်း ကလေး ၃ ယောက် အမေက လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် ကောင်တီ တရားရုံးမှာ မေ ၅ ရက်က တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအပေါ် မေ၀ယ်သာက လိမ်လည် ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/07/2015 12:59:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ပျံ့နှံ့နေ သည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဆိုင်းဘုတ် တင်ထားသော အိမ်သည် မာန် အောင်မြို့ရှိ ၎င်း၏အိမ်ဖြစ်သော် လည်း ယင်းအိမ်တွင် ၎င်းအပါ အဝင် မိသားစုဝင်များ နေထိုင်မှု မရှိသည်မှာ ဆယ်နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ် ကြောင်း နေတိုးက ပြောသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/07/2015 12:57:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
စစ်သွေးကြွများ လက်မှ ပြန်လည်ကယ်ဆယ်နိုင် ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများအနက် အနည်းဆုံး ၂၁၄ ဦးတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ ပြောကြား
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အရှေ့ မြောက်ပိုင်းတွင် မကြာသေးမီက ဘိုကိုဟာရမ် စစ်သွေးကြွများ လက်မှ ပြန်လည် ကယ်ဆယ် နိုင်ခဲ့သည့် အမျိုးသမီးများနှင့် မိန်းကလေးငယ် များအနက် အနည်းဆုံး ၂၁၄ ဦးမှာ ကိုယ်ဝန် ရှိနေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့က မေ ၄ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ချက်ကို Press TV တွင် ရေးသား ဖော်ပြ ထားသည်။
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/07/2015 12:55:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/06/2015 10:56:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အိမ်မဲမြို့နယ်တွင် နွားမှောင်ခို လာရောက်စစ်ဆေးသော ရဲတပ်ဖွဲ့အား မွတ်စလင်များက ၀ိုင်းဝန်းရိုက်နှက် ၊ ဒု-မြို့နယ်မှူး ခေါင်းကွဲ လက်ကျိုး ဖြစ်ရ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/06/2015 10:52:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ယနေ့ သိလျှက်နှင့် မဖြစ်မနေစားသုံးရေးပုံရိပ်မြင်ကွင်း
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/06/2015 10:50:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
RCSS/SSA အဖွဲ့မှ အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီးသော ဒေသခံရှမ်းလူမျိုးများအား လူသစ်အဖြစ် အတင်းအကြပ် ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/06/2015 10:30:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက်ရေးသားသည့် ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်များနှင့် နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်
September 20, 2012 at 7:13pm
မြန်မာနိုင်ငံကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေပေါ်မှာကြောက်မက်ဖွယ်ရာလုပ်ကြံဖန်တီးဖော်ပြထားတာတွေကို တွေ့လိုက်ရတော့ ကျွန်တော့်မှာတော်တော်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။ လူတော်တော်များများကမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုတော်တော်သိလာကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/06/2015 10:25:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
Mini A8 GPS အသုံးပြုနည်း
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/06/2015 10:18:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
အလုံဘူတာ အနီး ရထားပေါ်မှ ပြုတ်ကျသူ တစ်ဦး
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/06/2015 10:08:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
ပုခုံး ဒဏ်ရာရထားတာ မပြောတဲ့ ပတ်ကွီအိုကို တရားစွဲ
BrightStars. http://mixgawli.blogspot.com ပို့ စ်တင်ပြချိန် 5/06/2015 09:58:00 am No comments: ကွန့် မက်ရေးလိုသော်ဒီစာကိုကလစ်လိုက်ပါ
မဆင်မခြင် ဆိုင်ကယ်စီးခြင်း မော်တော်ယာဉ်မောင်းခြင်း...
မြောက်ကိုရီးယား ရေငုပ်သင်္ဘောမှ ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွှ...
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တွင် RNSC နှင့်တိုက်ပွဲ ...
မိုဘိုင်းတင်းမ်က သုံးနှစ်ကျော်အတွင်း တရားမဝင် ကုန်...
အိမ်မဲမြို့နယ်တွင် နွားမှောင်ခို လာရောက်စစ်ဆေးသော ...
ယနေ့ သိလျှက်နှင့် မဖြစ်မနေစားသုံးရေးပုံရိပ်မြင်ကွင...
RCSS/SSA အဖွဲ့မှ အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်ပြီးသော ဒေသခံရှမ...